Wasaaradda Arimaha Gudaha Puntland oo ka warbixisay Abaarta ka jirta Gobolka oo Dhan – Radio Daljir
Wasaaradda Arimaha Gudaha Puntland oo ka warbixisay Abaarta ka jirta Gobolka oo Dhan
Oktoobar 15, 2015 5:50 b 0
Waaxda gargaarka iyo gurmadka Masiibooyinka wasaaradda arrimaha gudaha dowladdaha hoose iyo horumarinta reer miyiga dowladda Puntland ayaa shaaca ka qaaday in deegaamada Puntland uu kajiro jiilaal daba dheeraaday oo u baahan gurmad bini’aadanimo iyo baryo Eebe.
Wasiir kuxigeenka wasaaradda arrimaha gudaha oo ay weheliyeen agaasimaha gargaarka iyo gurmadka Masiibooyinka iyo qaar kamid ah saraakiisha wasaaradda oo shir ku qabtay xarunta wasaaradda ayaa shaaciyey in dadka iyo duunyada kunool miyiga, tuulooyinka iyo qaar kamid ah degmooyinka Puntland ay u baahan yihiin in gargaar lagaarsiiyo.
Agaasimaha waaxda gargaarka iyo gurmadka masiibooyinka Cawil Buulo ayaa sheegay in abaartu tahay mid daba dheeraatay Isagoona baaq u diray ganacsatada Soomaaliyeed iyo Hay’adaha gargaarka.
Cabdullaahi Xaashi Qoob-deero wasiir kuxigeenka arrimaha gudaha ayaa sheegay inay Hay’adaha kala hadleen sidii dadkaasi gurmad loogaarsiin lahaa, isagoona bulshada ku booriyey inay Iscaawiyaan.
Qayladhaantaan ayaa kusoo beegmaysa xilli inta badan degmooyinka Puntland ay kadheceen banaan baxyo roobdoon ah, waxaana dadka Soomaaliyeed looga fadhiyaa sidii ay isugu gurman lahaayeen.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida _Jimco_16
Barlamaanka Somaliya iyo AMISOM oo Shirar ku leh Muqdisho